माइक्रो-टेम्पो चालकको प्रश्न- हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/माइक्रो-टेम्पो चालकको प्रश्न- हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ?
काठमाडौँ– तीन सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक सवारी जोरविजोर मापदण्डमा चल्न थाले। तर माइक्रो र टेम्पो चल्न नपाउने भएपछि विष्णुमायाका हातखुट्टा झनै गलेका छन्। विष्णुमाया भन्छिन- ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि त हाम्रो टेम्पो पनि चलाउन दिनु पर्ने हो नि, हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ? कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरे जस्तो भएन र ?
लकडाउनअघि विष्णुमायाको जीवन सामान्य थियो। गल्फुटार बस्ने उनी बिहानै सार्वजनिक गाडी चढेर चाबहिल आउँथिन्। त्यहाँबाट सिफलस्थित टेम्पो चार्ज गर्ने स्टेसन पुग्थिन्। त्यसपछि दिनभरी अनामनगर-सुन्धारा रूटमा टेम्पो चलाउनु उनको दैनिकी थियो । उनका श्रीमान पनि निजी गाडी चलाउँथे। सासू–सुसुरा, जेठाजु –जेठानी र बच्चाहरू सहितको उनको ठूलो परिवारमा त्यति ठूलो समस्या केही थिएन।
दुई जना दिनरात खटिएर आफ्नी ६ वर्षीया छोरीलाई ठूलो मान्छे बनाउने पनि सपना देखिरहेका थिए। को’रोना, लकडाउन र निषेधाज्ञाले उनीहरू दुवैलाई बेरोजगार बनायो। कोठा भाडापनि ३ महिनाको तिर्नै बाँकी रहेछ। रासन उधारोमै किनेकी छन्। मजदुर संग ठनले थोरै राहत दिए पनि कुनै सरकारी निकायबाट राहत नपाएको उनले सुनाइन्।
‘२४ गतेपछि गाडी खुल्छ भन्ने सुनेकी थिएँ। खुल्न त खुलेछ तर टेम्पो चलाउन नपाउनेगरी,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘पैसा सकिएर ऋण लागि सक्यो। चलाउन पाए त भोलिबाटै जान्थेँ ।’ उता, निलो माइक्रो व्यवसायी ५१ वर्षीय कृष्णप्रसाद घिमिरेको समस्या उस्तै छ। विगत दस वर्षदेखि कलंकी–रत्नपार्क रूटमा माइक्रो गुडाएर परिवार धानेका थिए। तीन वर्षयता छोराले नै त्यो माइक्रो चलाउन थालेपछि चालक राख्नु परेन। उनलाई झनै राहत भएको थियो।
त्यही माइक्रोको कमाइले घर खर्च, कोठा भाडा, स्नातकोत्तर पढ्दै गरेकी छोरीको पढाई खर्च लगायत सबै धानिएको थियो। माइक्रो चलाउन नपाएपछि उनको परिवारको कमाइ ठप्पै छ। ‘छोराले जम्मा गरेको अलिअलि पैसा सुरूको १-२ महिनामै सकियो । कोठा भाडा नतिरेको महिनौं भयो। रासन पनि ओल्लोपल्लो पसलबाट उधारो नै ल्याइरहेका छौं,’ कृष्णप्रसादले भने।
अरू गाडी चल्न दिएर सानो माइक्रो चल्न नदिएकोमा उनलाई पनि गुनासो छ। भन्छन ‘सानो ट्याक्सी चल्न दिने अनि हाम्रो गाडी किन नदिने? सरकारले हामीलाई किन भेदभाव गरेको? हामीले परिवार पल्नु पर्दैन? पेट भर्नु पर्दैन?’ विष्णुमाया र कृष्णप्रसाद जस्ता धेरै चालक छन्। विस्तृतमा सेतोपाटिमा सुधिर भण्डारीले लेख्नु भएको छ ।
नेपालमा पनि अब को’रोनाका गम्भिर प्रकृतिका विरामीलाई यो औषधि दिइने, विभागले दियो अनुमति
नेपालमा आज २ हजार ४४ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भए, कोरोनालाई जित्नेको संख्या ६३ हजार नजिक